ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको स्कारपिओ भदौरे भीरमा दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको स्कारपिओ भदौरे भीरमा दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु !
उदयपुर । उदयपुरमा स्कारपिओ दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । कटारी नगरपालिका–१४ भदौरे भीरमा शनिबार राती स्कारपिओ दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
भैरहवाबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बा.२०.प.७१७१ नम्बरको स्कारपियो राती १२ बजे सिद्दिचरण लोकमार्गमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको पहिचान खुलेको छैन । ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङ–९ का ३० वर्षीय रामबहादुर सार्की र २६ वर्षीय कर्मी सार्की रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी बेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
दुर्घटनामा ओखलढुंगाको मानेभञ्याङ–९ की २८ वर्षीय कुमारी सार्की, २२ वर्षीया कल्पना सार्की र चालक रुपन्देही त्रिगम्वा नगरपालिका–४ का २८ वर्षीय पनव खड्का गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीको बदमासीः बियर भन्दै लोकल रक्सी बिक्री गर्दै !